Ogow waxa "All My Files" galka ku jira Raadiyaha | Waxaan ka socdaa mac
Ogow waa maxay galka «All My Files» ee Raadiyaha
Javier Porcar | | Tababarada, dhowr
Maalmo ka hor, akhriste boggayaga ayaa naga dhigay su'aal la xiriirta galka "Dhamaan faylashayda" in waa mid iska caadi ah dhinaca loo raadsado. In Soy de Mac, ka sokow wargelinta, waxaan jecel nahay qaybta barbaarinta inta aqoontayadu gaarto. Sidaa darteed, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la sameeyo casharro la xiriira shakiga aqristaha, waana hubaa inuusan kaligiis noqon doonin.
Faylka "dhammaan faylashayda" waxaa loo sameeyay markii ugu horreysay Mac OS Sierra. Shaqadeeda ugu weyni waa in la helo faylal nooc kasta ha ahaadee, oo dhawaan la abuuray oo la dalbaday iyadoo la raacayo shuruudaha "taariikhda la furay ee ugu dambeysay".
Waxa dhab ahaan inaga dambeeya waa a galka xariifka ah Finder, oo uu abuuray nidaam ahaan nidaam ahaan. Taasi waa in la yiraahdo, Waa galka kaydiya sawirka mid kasta oo feylasha ka mid ah oo ku amraya sida ugu dambaysa ee loo abuuray ama loo isticmaalay. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato feylasha casriga ah waxaan ka heli karnaa gudaha casharka xiga.
Waxaa muhiim ah in la xoojiyo inay tahay sawir, ma aha isku-marinta faylasha sidaa darteedna, haysashada ama la'aantu galka ma beddeleyso cabirka xusuusteenna ama haddii ay yeelato, kala duwanaanshaheeda ayaa ugu yar.
Sidaa darteed, haddii aan u helno feylka si aan wax uga beddelo, sida: wax ka beddelno oo mar kale xir, ka soo duub faylka casriga ah fayl kale oo nidaam ah ama xitaa tirtir, ficilkan waxaa loo samayn doonaa si la mid ah sidii aan ku sameynay galka asalka ah. Si kale haddii loo dhigo, shaqada faylka casriga ahi waa inuu noo fududeeyo helitaanka faylka, haddii aan ognahay in dhowaan la abuuray ama wax laga beddelay oo, sidaa darteed, wuxuu ku jiri doonaa xagga sare ee galka.
Sidaa darteed waa aalad badbaadinaysa waqtiga markaad la shaqeyneyso faylal badan oo ku jira maalintaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Ogow waa maxay galka «All My Files» ee Raadiyaha
Mahadsanid, sifiican ayaa loo sharaxay ..
Ku jawaab Wilson Vega
Hadda waxaan helay Mac sierra 27 ″. Weyn Waxaan ka imid Windows. Anigu ma ihi dildilaac, laakiin waan isdifaacayaa. Aad ayaan ula yaabay sida ay u adag tahay in la beddelo noocyada xarfaha. Waan da 'weynahay inkasta oo aan xirto muraayadaha indhaha, indhahaygu way daalaan inkasta oo qeexitaanku aad u sarreeyo. Waxaan raadiyay wadar iyo run, waan lumay. Aad ayaan u bogaadinayaa sharraxaad tallaabo tallaabo ah oo lagu xallinayo arrintan. Waan ogahay inaad awoodid, qaasatan lasiiyo qeybta mishiinka. Ma heli karo buugaag sharaxa. Waan ogahay inay jiraan xayeysiin ku saabsan sheekooyinka wararka internetka qaarkood ee ku saabsan mowduuca, laakiin si buuxda uma aamini karo. Waan ka xumahay garaacista laakiin mid ayaa awalba da 'ah waana sidaas oo kale.
Jawaab ku sii Carlos Ribes Fabregat
Waad salaaman tihiin dad qurxoon !! Maxaa dhacaya haddii aan tirtiro feylasha ku jira galka "faylalka oo dhan"? Miyay ka baaba'aan fayl kale?
ha ii jawaabin, horeyba waan u caddeeyey naftayda, waxaan ku sigtay cabsi darteed! Haddii aan ka tirtiro dukumintiyada galka "faylalka oo dhan" waxaa laga tirtiraa fayllada kale iyaguna! 🙁
Anigu waxaan ahay taageere weyn oo galka "faylalka oo dhan", waxaan u isticmaalaa maalin kasta shaqada waxaanna u sahlaa noloshayda si aan la qiyaasi karin "taas oo aniga ilama muuqato wax sidaas u wanaagsan, maxaa yeelay waxay i tusaysaa waxyaabo aad u yar mana fahmi karo shuruudaha ay adeegsato ee ay ku muujinayaan qaar iyo kuwa kale.
Shalay waxaan ka helay wax ku saabsan dib u dhiska tusmada tooska, waan sameeyay waana yara fiicnaatay ... laakiin wali shaki ayaa iiga jira, hadii ay khalad ku jirto raadiyaheyga ama cusbooneysiinta High Sierra, waa inaan ku cadeeyaa taas iMac shaqada waxaan ku leeyahay Sierra.
Waxaan rajeynayaa in qof i caawin karo.
Ku jawaab Marlon Corado
Apple wuxuu ka saarayaa aaladda "Activation Lock" aaladda shabakadda
Tim Cook oo ku saabsan amarka Trump ee kahortagga socdaalka: "ma ahan siyaasad aan taageersanahay"